Gabadh u dhalatay Sacuudiga kana baxday Diinta ayay Canada magan-galyo siisay – XOGMAAL.COM
Gabadh u dhalatay Sacuudiga kana baxday Diinta ayay Canada magan-galyo siisay
Caadiyan dowladaha ayaa qofka u aqoonsada inuu qaxooti yahay hasayeeshee Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sidoo kale qofka siin karta heerka qaxootinimada "waa marka aanan qofka la siin ama laga cagajiido heerkiisa qaxootinimada", sida lagu sheegay barta internetka ay hay'addaasi ku leedahay.
By Soomaaliya	 On Jan 12, 2019
Hay’adda UNHCR ayaa sheegtay in dowladda Canada aqbasha in ay magan-galyo siiso Raxaf Maxamed al-Qunun taasoo loo aqoonsaday in ay Qaxooti tahay kaddib markii ay ka soo baxsatay reerkeeda.
Raxaf Maxamed al-Qunun, oo ah 18-jir ayaa Isniintii diidday in ay raacdo diyaarad ka kicitimi laheyd Bangkok oo tegi laheyd Kuwayt, waxa ayna isku soo xirtay qol ay ka deganayd hoteel ku yaal garoonka diyaaradaha oo u kiraysnaa.
Waxaa ay sheegtay inay isaga baxday diinta Islaamka, taas oo ciqaabteeda gudaha Sucuudi Carabiya ay tahay dil.
Mudaharaadayaal Imaam Masjid ku qasbay in uu Banaan baxa ka qayb galo.
Wasiirka Difaaca Ingiriiska oo baajiyay kulan uu la qaadan lahaa Madaxweyne Farmaajo